Fiankinan-doha amin'ny tetika marketing miditra | Martech Zone
Asabotsy, Jona 15, 2013 Asabotsy, Jona 15, 2013 Douglas Karr
Efa am-bolana maro izahay no nanadihady ireo mpanjifa lehibe sy kely ary mino tokoa fa misy ny banga amin'ny ankamaroan'ny paikady sy ny fisavoritahana amin'ny hafa. Rehefa sahirana ny mpanjifanay dia matetika hitanay fa misy banga amin'ny fiankinan-doha lehibe amin'ny varotra ankapobeny. Tetikady marketing mahomby miditra angamba tsy tafiditra ao marketing marika, fanentanana or fampandrosoana ny fiaraha-monina - fa miankina betsaka amin'izy ireo izany.
Brand - saika tsy azo atao ny manana tetikady marketing mahomby raha tsy manana endrika sy fahatsapana tsy tapaka, fandefasana hafatra ary feo ho an'ny orinasanao, vokatrao sy serivisinao. Mila mahafantatra anao ny olona ary mahatakatra ny soa azonao avy amin'izy ireo.
Authority - Ny fizarana asa dia hita fa ezaka amin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro fa ny fanitarana ny mpihaino anao amin'ny alàlan'ny fitadiavana ny hafa amin'ny Internet dia tena ilaina. Olona media sosialy maro no hilaza aminao fotsiny fa manangana mpihaino anao manokana ianao. Fa maninona no hataonao izany raha misy efa manana izany mpihaino izany? Mandehana tadiavo izy ireo!
Community - mitandrina sy mitombo mpihaino ho lasa vondrom-piarahamonina mandroso mila paikady atiny tsy manam-paharoa, fifantohana betsaka ary ekipa manan-talenta. Na izany aza, raha vao manana vondrom-piarahamonina iray ianao - manana tafika mpivarotra ianao. Io no grail masin'ny media sosialy!
fiovam-po - tsy misy fampiharana ara-dalàna ny Analytics, fanatsarana sy fanandramana, tsy ho afaka hanova ny fitarika anananao ho mpanjifa ianao. Ny famaritana, ny fandrefesana ary ny fanatsarana ny lalan'ny firosoana dia zava-dehibe.
Betsaka ireo masoivohon'ny varotra no manahy bebe kokoa sao hahazo ny anjarany amin'ny tetibola varotra ary matetika izy ireo no manosika ireo orinasa mankany amin'ny lalana misy azy ireo. Ny olana dia toy ny tongotra eo ambony latabatra ireo… rehefa mamoaka iray ianao dia lasa tsy mahomby intsony ny hafa. Rehefa miara-miasa amin'ny mpanjifa isika dia matetika no manizingizina na manery azy ireo hiara-miasa marika sampan-draharaha, orinasam-pifandraisana ary fampandrosoana ny fiaraha-monina orinasa.
Na dia mahomby 100% aza isika, raha tsy misy iray amin'ireo singa hafa, ny paikadim-barotra mihoa-pampana dia tsy mahomby. Ny fiantohana ny fiankinan-doha tsirairay dia ampiharina amin'ny fomba mahomby dia manome orinasa mahatratra hatrany amin'ny marketing, ny mety ary ny fahombiazany amin'ny marketing.
17 Jun 2013 amin'ny 1:39 AM
Paikady mahomby tokoa amin'ny marketing. Eo amin'ny sehatry ny marketing toerana dia zava-dehibe indrindra hahazoana fahombiazana. Manantena aho fa hanampy ahy be ny lahatsoratrao !!
17 Jun 2013 amin'ny 6:49 AM
Lahatsoratra tsara Doug! Tena tiako ny lahatsoratra eto .. Misaotra nizara…